Njem Mgbasa Ozi Agile | Martech Zone
N'ime afọ iri nke inyere ụlọ ọrụ aka ịmalite azụmaahịa ha n'ịntanetị, anyị emeela usoro ndị na-eme ka ihe ịga nke ọma sie ike. Ọtụtụ mgbe, anyị na-ahụ na ụlọ ọrụ na-alụ ọgụ maka ahịa dijitalụ ha n'ihi na ha na-anwa ịwụli ozugbo na igbu kama iwere usoro ndị dị mkpa.
Mgbanwe Mgbasa Ozi Dijitalụ
Mgbanwe nke ahịa na-agbanwe agbanwe na mgbanwe dijitalụ. Na nyocha data sitere na PointSource - Imezu Mgbanwe Dijitalụ - data anakọtara site na ndị na-eme mkpebi 300 na Ahịa, IT, na Arụ Ọrụ na-arụtụ aka na mgba ndị azụmaahịa nwere na-emeziwanye na onye njedebe njedebe n'uche. Ha chọpụtara na ụlọ ọrụ:
Enweghị ihe mgbaru ọsọ na ntụziaka doro anya - naanị 44% nke azụmaahịa na-ekwu na ha nwere ntụkwasị obi siri ike na ikike nzukọ ha iji mezuo ọhụụ ya maka uto na 4% enweghị ntụkwasị obi ma ọlị.
Gbalịsie ike ijikọ ahụmịhe dijitalụ - naanị 51% nke azụmaahịa na-ekwu na nzukọ ha na-ekwu maka mkpa onye ọrụ ọ bụla gafee nyiwe niile
Nwee ọgụgụ isi siri ike nke mepụtara ihe mgbochi maka mgbanwe dijitalụ - 76% nke azụmaahịa na-ekwu na ngalaba ha na-asọmpi na ngalaba ndị ọzọ na nzukọ ha maka akụrụngwa na / ma ọ bụ mmefu ego.
Na-arụ ọrụ na usoro ihe ochie nke na-egbochi ikike imeziwanye ahụmịhe dijitalụ - 84% na-ekwu na nzukọ ha nwere usoro ihe nketa dị iche iche nke na-emetụta ọsọ nke mmepe ọhụụ ọhụụ ọhụụ
Ihe ndị a bụ ihe iyi egwu nye nzukọ gị ka ị na-atụ anya ịgbanwe ahịa dijitalụ gị. Anyị nwere nnukwu ụlọ ahịa na mpaghara ahụ chọrọ enyemaka na ahịa dijitalụ ha. Anyị hụrụ ohere dị egwu maka ha iji mejuputa usoro ecommerce ọhụrụ nke agbakwunyere na ahịa ha. Agbanyeghị, ndị ndu ahụ jụrụ ụgwọ n'ihi na ha wuru ngwongwo na usoro azụmaahịa nke furu ha ọtụtụ iri nde dollar ọtụtụ afọ. Ha kwuru na itinye ego ọ bụla n'ahịa ọhụrụ, ngwa ahịa na mmezu ya adịghị na mkparịta ụka ahụ.
Nsonaazụ bụ na enweghị ike ịmekọrịta ma ọ bụ njikọta n'etiti ahịa na ịntanetị. Anyị siri na atụmanya a pụta ọtụtụ nzukọ na-ekwe nkwa - ọ nweghị ụzọ anyị ga-esi nweta nsonaazụ uto ha chọrọ n'ihi enweghị ike nke usoro ha. Enwere m obere obi abụọ na nke a bụ nnukwu ihe kpatara ọgụ ha - ma ha etinyela akwụkwọ maka enweghị ego mgbe ha lechara azụmaahịa ha anya kemgbe ọtụtụ afọ.
Njem Azụ ahịa Agile
Ọ bụrụ na azụmahịa gị nwere olile anya imeghari ma merie nsogbu ndị a, ị ga-enwerịrị otu ahịa agile usoro. Nke a abụghị akụkọ, anyị na-ekerịta usoro agile ahia ruo afọ ole na ole ugbu a. Mana ka afọ ọ bụla na-agafe, mmetụta nke usoro azụmaahịa anaghị agbanwe agbanwe na-aga n'ihu na-emebi azụmaahịa na karia. N’oge na-adịghị anya, azụmahịa gị adịghị mkpa.
Ndị na-egosi arụmọrụ igodo abawanyewo maka azụmahịa dijitalụ, gụnyere ịmara, itinye aka, ikike, ntụgharị, njigide, mbido, na ahụmịhe. N'ime akwụkwọ ozi anyị kachasị ọhụrụ, anyị akọwapụtara njem anyị na-akpọrọ ndị ahịa anyị iji hụ na ha nwere ọganiihu. Nzọụkwụ nke Agile Marketing Journey gụnyere:
Buru n'uche na nke a bụ njem zuru oke, ọ bụghị usoro eji eme ihe iji mejuputa ma mezuo ya ahịa agile azum. Otu ihe omuma zuru oke bu nke ConversionXL Etu esi mejuputa Scrum maka ahia Agile.
Naanị anyị chọrọ ịkọwa mmekọrịta dị n'etiti isi ụzọ nke njem gị yana ihe ndị a ga-enyocha ka ị na-agagharị na mbara igwe nke ahịa dijitalụ. Enwere m olile anya na ị ga-enwe ọ infoụ na ihe ọmụma a dịka anyị nwere obi ụtọ ịrụ ọrụ na ya n'ọnwa gara aga! Ọ bụ ntọala nke onye ọ bụla n'ime ahịa anyị.
Enwekwara m mpempe akwụkwọ na-enyere gị aka ịhazi atụmatụ azụmaahịa gị ma hụ na itinye aka na ebumnuche ụlọ ọrụ gị.
Budata akwukwo ahia nke ndi ahia
Jide n'aka na ịpịrị ụdị zuru ezu ma ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ịgụ ya!
Tags: ahịa agilenjem agile ahịaụdị ahịa ahịa agileusoro ahia ahiaikikeMmataakakabaredemgbanwe ntanetịchọpụtaranjikọ akaegbu egbuahụmahụmmejuputanjemusoro ahiaahịa nlereanyamodelnjikarịchausoronjigideatụmatụmgbanwegbasie